Ulwazi oluningiliziwe mayelana nephutha le-CHECKDB "Ngesikhathi kwenziwa kabusha umsebenzi ongene ngemvume ku-database 'xxxx', kwenzeke iphutha kwi-ID yerekhodi lokungena."
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen SQL Recovery Iphutha le-CHECKDB: Ngesikhathi sokwenza kabusha i-Logged Operation Ku-Database 'xxxx', Kwenzeke iphutha ku-Id Record Record
Imininingwane Eningiliziwe Ngephutha le-CheckDB "Ngesikhathi Sokwenza Kabusha Umsebenzi Ongene Kwi-Database 'xxxx', Kuvele Iphutha Ku-Log Record Id."
Msg 824, Izinga 24, State 2, Line 2
SQL Server ithole iphutha elinengqondo lokuvumelana ngokuya kwe-I / O: i-pageid engalungile (kulindeleke 1: 143; uqobo lwama-0: 9). Kwenzeke ngesikhathi kufundwa ikhasi (1: 143) kwi-database ID 39 kusethi 0x0000000011e000 kufayela 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerI-MSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imilayezo eyengeziwe kufayela le- SQL Server irekhodi lephutha noma irekhodi lomcimbi wohlelo lingahlinzeka ngemininingwane eminingi. Lesi yisimo sephutha esibi esisongela ubuqotho besizinda semininingwane futhi kufanele silungiswe ngokushesha. Gcwalisa isheke eligcwele lokungaguquguquki kwe-database (DBCC CHECKDB). Leli phutha lingadalwa yizinto eziningi; ukuthola eminye imininingwane, bheka SQL Server Izincwadi eziku-inthanethi.
Msg 3313, Izinga 21, State 1, Line 2
Ngesikhathi kwenziwa kabusha umsebenzi ongene ngemvume ku-database 'Error1', kwenzeke iphutha ku-ID irekhodi le-log (135: 752: 2). Imvamisa, ukwehluleka okuthile kufakwe ngemvume njengephutha kusevisi ye-Windows Event Log. Buyisela i-database kusuka kusipele esigcwele, noma lungisa i-database.
SQL Server ithole iphutha elinengqondo lokuvumelana ngokuya kwe-I / O: i-pageid engalungile (kulindeleke u-1: 160; uqobo ongu-0: 41). Kwenzeke ngesikhathi kufundwa ikhasi (1: 160) kwi-database ID 39 kusethi 0x00000000140000 kufayela 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerI-MSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imilayezo eyengeziwe kufayela le- SQL Server irekhodi lephutha noma irekhodi lomcimbi wohlelo lingahlinzeka ngemininingwane eminingi. Lesi yisimo sephutha esibi esisongela ubuqotho besizinda semininingwane futhi kufanele silungiswe ngokushesha. Gcwalisa isheke eligcwele lokungaguquguquki kwe-database (DBCC CHECKDB). Leli phutha lingadalwa yizinto eziningi; ukuthola eminye imininingwane, bheka SQL Server Izincwadi eziku-inthanethi.
Msg 824, Izinga 24, State 2, Line 4
Msg 3313 kukhombisa ukusebenza kwelogi okungenziwa.
Lapho i-CHECKDB ingakwazi ukusebenza ngokungena ngemvume, izobika umyalezo wephutha Msg 3313 bese uzama ukulungisa amaphutha. Uma ingakwazi ukulungisa iphutha, khona-ke ukutakula kwehluleka futhi kuzoholela emaphutheni amaningi, njenge UMsg 3414 noMsg 824.
Sampula amafayela we-MDF akhohlakele azobangela Msg 3313 iphutha:
SQL Server 2014 Iphutha9.mdf Iphutha9_fixed.mdf